Caadooyinka iyo Dhaqammada Qabiilka Mursi ee Koonfurta Itoobiya | Xarshinonline News
Caadooyinka iyo Dhaqammada Qabiilka Mursi ee Koonfurta Itoobiya
Bulshooyinka kala duwan ee caalamka waxa ka jira dadyow u qaabaysan qabaa’ilo kuwaas oo waddamada ay ku nool yihiin aan si weyn looga tixgelin dhaqannadooda iyo caadooyinkooda. Dadyowgaasi waa kuwa loo yaqaan cawaanka waxaanay leeyihiin dhaqanno ka yaabiya dadka kale ee caadiga ah.
Haddaba, waddanka Itoobiya ee aynu jaarka nahay waxa ku nool dadyow kala duwan. Kuwan waxa ka mid ah qabiilka loo yaqaan Mursi oo mararka qaarna loo yaqaan Murzu kuwaas oo ku nool deegaanka geeri-go’anka ah ee Debub Omo oo ku yaala Koonfurta Itoobiya una dhow xadka ay la wadaagto Suudaan. Qabiilka Mursi ee ku nool deegaankan waxa lagu qiyaasaa 10,000 qof, xukuumadda Itoobiyana waxa ay qabiilkaas la kooxaysaa labada qabiil ee kale ee Suri iyo Me’en kuwaas oo dhammaantood ay ugu yeedhaan qabiil-weynaha Surma kaas oo qabiilka Mursi uu diiday inuu hoos yimaadda isla markaana loogu yeedho Surma.
Mursigu waxa uu kaga duwan yahay qabiillada kale ee Afrikaanka ah ee ay dhaqamada iyo caadooyinka wadaagaan, waa dad meel kaliya deggen oo aan guur-guurin. Waxa jira siyaabo badan oo ay qabiilkani kaga duwan yihiin dadyowga ay isku deegaanka yihiin. Tusaale ahaan, Luqadda ay dadkani ku hadlaan waxa ay ka mid tahay bahda afafka la isku yidhaahdo Nilo-Saharan, halka dadyowga ay isku deegaanka yihiin qaarkood kaga hadlaan bahda luuqadaha la isku yidhaahdo Afro-Asiatic oo luqadda Amxaarigu ka mid tahay, in kasta oo qaybo yaryar oo qabiilkan ka mid ahi ku hadlaan luqadda Amxaariga.
Dadka Qabiilkani intooda badani waa qaar aan waxba akhriyin waxna qorin. Marka la eego dhinaca diimaha ay aaminsan yihiin, in kasta oo inyar oo ka mid ahi ay haystaan diinta Masiixiga, intooda badani waxa ay caabudaan xayawaanada, iyaga oo rumaysan in dhirta, xayawaannada iyo qaar kale oo ka mid ah walxaha aan noolayn ay ruuxi ku jirto.
Waxa qabiilkan lagu yaqaanaa in hablahooda iyo dumarkuba ay dabnahooda hoose ku xidhaan biro wareegsan waxaanay dhaqamadan isaga mid yihiin qabaa’illada Amazon sida Suya oo ku nool agagaaarka webiga Xingu ee waddanka Brazil, in kasta oo qabiilka Suya raggoodu ay dabnahooda ku xidhaan biraha wareegsan, halka Mursi-ga ay dumarku ka xidhaan.
Qabiilka Mursi-ga hablaha gashaantimaha ahi waxa ay dabnahooda ka hoose ka lulaan bir wareegsan iyo kuulo ka laadaan. Sida ay tani ugu suurto-gasho, qabiilkani waxa ay sameeyaan in hablaha inta ay yar-yar yihiin laga daadiyo ilkahooda hoose. Deegaanka ay qabiilkani ku nool yihiin oo ah dhul-kaymeed duur-joogtu ku badan tahay isla markaana dhaqaale badan ka soo galo dawladda Itoobiya, waxa ay muddooyinkii ugu dambeeyey la kulmayeen baro-bixin ay dawladda waddankaasi kaga saarayso deegaanka iyaga oo aan magdhow ka helin baabiin loo gaysto guryahooda ku dhex yaala dhulka duurjoogtu ku nooshahay.
Qabiilkan waxa lagu tixgeliyaa inay yihiin ka mid yihiin qabiillada Afrika ee ugu daan-daansiga badan isla markaana duullaannada ku qaada qabiillada kale. Waxa ay caan ku yihiin munaasibad dagaal oo la yidhaahdo Donga taas oo ay ulo ku ragga qabiilkan cawaanka ah. Ninka ku guulaysta dagaalkani waxa uu awood u leeyahay inuu xusho hablaha ugu quruxda badan ee qabiilkan, xataa haddii uu nin kale qabo. Qabiilkan waxa caado u ah inay cabbitaanka ka dhigtaan isku jirka caano iyo dhiig la isku daray sida ay sameeyaan qabaa’illada cawaanka ee ku nool meelo badan oo ka mid ah qaaradda Africa.
Hablaha Gashaantimaha ah ee Qamiilka Mursiga
Filed under dhaqanka, gobolka
← Wasiirka Arrimaha Dibadda Israel oo Qadiyadda Somaliland hordhigay Golaha Wasiirrada Waddankaas
Wasiirka Caddaaladda oo Sheegay in Guddiga Nabadgeliyadu Sharci tahay →